Muddo toban sano ah oo aan ka caawineyno shirkadaha inay kobciyaan ganacsigooda khadka tooska ah, waxaan adkeynay geeddi-socodka xaqiijinaya guusha. Inta badan maahan, waxaan ogaannaa in shirkaduhu ay la halgamayaan suuqgeynta dijitaalka ah maxaa yeelay waxay isku dayaan inay si toos ah ugu boodaan fulinta halkii ay ka qaadi lahaayeen tallaabooyinka lagama maarmaanka ah. Isbadalka Suuqgeynta Isbadalka Suuqgeynta Isbadalka Suuq geynta wuxuu lamid yahay isbedelka dhijitaalka Daraasad Xog ah oo ka socota PointSource - Fulinta Isbadal Dijital ah - xog laga soo ururiyey 300 go'aan qaadayaasha Suuqgeynta, IT, iyo dhibcaha Howlgallada
Safarrada Macaamiisha Tafaariiqda ah Gebi ahaanba Isbeddelay
Arbacada, Janaayo 6, 2016 Khamiis, Janaayo 7, 2016 Douglas Karr
Mararka qaarkood waxaan la yaabanahay haddii aan qoray boqol qoraal oo dheeri ah oo ku saabsan beddelashada dabeecadda wax iibsiga, boqolaal ilo xog oo dheeri ah, haddii rajadu ay bilaabi doonto dhageysiga. Waxay umuuqdaan inay dhageysanayaan, in kastoo. Markaan maqalno waan ka duwanahay ka dibna baaritaan ayaan sameynaa marwalba wax isku mid ah ayaan helnaa. Dabeecadda iibsashada macaamiisha ayaa is beddeleysa. Isbeddelku markii hore wuu gaabisnaa, laakiin hadda wuu sii kordhayaa. Shan iyo toban sano ka hor, 10kii qof ee soo booqda - 1 ama 2